🥇 Inkqubo yezothutho
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 147
Ividiyo yenkqubo yezothutho
Uku-odola inkqubo yezothutho
Ngaba isicelo simahla sokuqhutywa kwempahla siyinyani okanye akunakwenzeka ukuba ufumane into efanelekileyo simahla? Siza kuzama ukuphendula lo mbuzo kweli nqaku. Impendulo emfutshane nguewe-yinyani. Kodwa umbuzo ngulo, lusebenza kangakanani olu hlobo lwenkqubo, kwaye ngaba lulungile konke konke? Iqela lophuhliso lwesoftware ye-USU Software inika impendulo engacacanga-kuphela ziinguqulelo zedemo zeenkqubo ezilungileyo ezinokuthi zikhululeke. Iinguqulelo ezipheleleyo zeenkqubo ezinjalo zihlala ziyimveliso ehlawulwayo kwaye i-USU Software ayikhethi nto kuloo nto.
Inguqulelo yedemo yeSoftware ye-USU ibandakanya konke ukusebenza okusisiseko elinokufuneka nakweliphi na ishishini. Nangona kunjalo, ingxelo yedemo inexesha elinomda lokulingwa kwaye ngenxa yoko ayilifanelanga i-automation yothutho lwexesha elide. Injongo yokuhambisa yenzelwe ulwazi kuphela. Inkqubo yethu inokukhutshelwa simahla kwaye unokuziqhelanisa nokusebenza kwayo kwiiveki ezimbini ezipheleleyo zexesha lokulingwa. Ungayifumana ingxelo yedemo kwiwebhusayithi yethu esemthethweni. Ukuze uthenge ingxelo epheleleyo, qhagamshelana neqela lenkxaso yezobugcisa usebenzisa iirikhwizishini ezinokufumaneka kwiwebhusayithi. Lonke ulwazi oluneenkcukacha malunga nokubanakho kwesicelo lufumaneka nalapho.
Akukho ngqiqweni ukusebenzisa iinkqubo zasimahla kulungiselelo lwezothutho. Iinkqubo ezinje ngezi azinakuqinisekisa ukuphunyezwa okuzenzekelayo kwayo yonke imisebenzi emi phambi kweshishini elifuna olona lawulo luchanekileyo nakweyiphi na into yokuhambisa kunye nenkampani yokuhamba. Umzekelo, ukuba uthenga isicelo kubaphuhlisi beSoftware ye-USU, ufumana ithuba elihle lokulandela umkhondo wenkampani yonke, kunye nomsebenzi ngamnye. Inkqubo ixhotyiswe ngokusebenza kokulandela umkhondo iiyure zomsebenzi. Umsebenzi ngamnye owenziwa ngumqeshwa uyarekhodwa. Kunye nexesha elichithwe kuyo kunye nomgangatho womsebenzi obonelelweyo.
Ukuba ufuna inkqubo yezothutho, akukho ngqiqweni ukuzama ukuyikhuphela simahla, kodwa ishishini lakho alinalo uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu okwangoku, singakunika isisombululo sokwenza izinto zokuhamba, ngexabiso eliphantsi, ukanti nge Iindidi zemisebenzi eluncedo. Umzekelo, ngoncedo lwe-USU Software, uya kuba nakho ukulandelela konke ukuhanjiswa ngexesha langempela. Kodwa ukusebenza kwenkqubo kulawulo lwenkqubo yokuhamba akupheleli apho.
Isiseko sedatha inolwazi ngokubanzi malunga nokuthuthwa kwempahla. Uya kuba nakho ukufikelela ngokukhawuleza kulwazi olugcinwe kwindawo yogcino lwenkqubo. Umzekelo ulwazi malunga nomamkeli kunye nomthumeli wepasile, iimpawu zemveliso, ubungakanani bayo, ubunzima bayo, njalo njalo. Ukongeza, unokucela ixabiso lempahla, indawo yokuhanjiswa kwimephu, kunye nomhla wokuthunyelwa.
Inkqubo yolawulo lwezothutho, enokukhutshelwa simahla njengenguqulo yedemo, inezibonelelo ezininzi ngaphezulu kwezicelo ezisimahla. Inkqubo oyikhuphele simahla ayizukukwazi ukubonelela ngogcino ngokwemisebenzi iSoftware yeUSU enakho ukuyenza. Ngapha koko, ngokomlinganiso weeparameter ezahlukeneyo ezinje ngexabiso-lomgangatho, nkqu naphakathi kwezicelo ezinga-simahla, isixhobo sethu sisabonakala. Inkqubo entsha yobalo lwezinto zothutho ezivela kwiqela leSoftware le-USU ziya kulunga ngokukuko kubume beenkampani zothutho lwemithwalo kunye nezinye iiarhente zokuhamba.
Izicelo zokuhanjiswa simahla kwezinto aziyi kuba nakho ukulandela ukuthunyelwa kweemodemodal ngokusebenza ngokufanelekileyo. Kwaye i-Software ye-USU iya kuwuphatha ngokugqibeleleyo umsebenzi wokulandela umkhondo wendlela yothutho, iintlobo zokuhanjiswa, kwaye iyakwazi ukuzihlela ngothutho olusetyenzisiweyo. Xa kuziwa kwinkqubo yethu, ayinamsebenzi ukuba loluphi uhlobo lwezothutho inkampani elusebenzisayo xa uhambisa iimpahla. Nokuba kukuthuthwa komoya, umzila kaloliwe, iilori, iinqanawa, okanye uthutho oluninzi-inkqubo yethu iya kusebenza ngokufanelekileyo kwaye ikhawuleze ukugqiba yonke imisebenzi yayo. Olunye uphawu lwenkqubo oluza kunceda ukuthuthwa kwempahla kulo naliphi na ishishini kubandakanya izibonelelo ezinje ngokukwazi ukwahlula ezothutho kunye nokuhanjiswa ngohlobo, kuxhomekeke kubungakanani bempahla kunye nenani lempahla kwezothutho.
Ukuba umbutho awunawo amasebe aphesheya kwezilwandle, kwaye umthamo weempahla ezithuthwayo awukho mkhulu kakhulu, kuyafuneka ukuba uthenge uguqulelo kwinkampani encinci, ngelixa kukho ukhetho lwamashishini anezinto ezinamasebe kumazwe ahlukeneyo. Inkqubo eluncedo yothutho lwezinto onokuzikhuphela simahla kuphela ngohlobo lwedemo eya kusebenza ixesha elinomda.
Iinkqubo zasimahla zokuhambisa zinika kuphela ixesha eliqingqiweyo lokusetyenziswa. Ukuthenga uhlobo olunelayisensi yesicelo ngexabiso elininzi, ufumana inkqubo elungiselelwe ngokugqibeleleyo yokulawula umsebenzi weofisi kwicandelo lokuthuthwa kwempahla kunye nabakhweli. Isoftware ye-USU ixhaphake kangangokuba ilungele ukuzenzekelayo kwayo nayiphi na inkampani ephathekayo.
Xa uqala ukusebenzisa into eluncedo, kuyakufuneka ubhalise kwaye uyigunyazise kwinkqubo. Emva kokungena ngemvume kumsebenzisi unikwa ukhetho lwezinto ezininzi ezicwangcisiweyo, eziza kubanceda ukuba benze indawo yabo yokusebenza. Emva kokukhetha uyilo kunye nemixholo yokwenza ubuqu, umqhubi uyaqhubeka nokukhetha ukusebenza kunye nokuseta ujongano. Zonke iinguqu zigcinwa kwiakhawunti yobuqu kwaye ngexesha lokugunyaziswa okulandelayo, akukho sidingo sokumisela yonke into kwakhona kamva. Ngomsebenzisi ngamnye, iakhawunti yakhe iyenziwa, kunye noseto lomntu.
Iinkqubo zasimahla azilungelelaniswanga nezixa ezikhulu zomsebenzi, ke kungcono kwaye kunenzuzo ngakumbi ukuthenga kwangoko inkqubo ehlawulelweyo, esebenza ngokukuko eya kukunceda ugqibe yonke imisebenzi oyinikiweyo. Kwi-Software ye-USU, yonke imisebenzi icwangciswe ngokulandelelana, ulwazi lugcinwa kwiifolda ezifanelekileyo, ekulula ukufumana ibhloko yolwazi olunomdla. Iinkqubo zasimahla kulungiselelo lwezinto aziyi kuba nakho ukukunceda usebenze ngokuthumela iposi kubaphulaphuli ojolise kubo, kodwa inkqubo yethu inokuwenza ngokulula lo msebenzi. Kwanele ukwenza ukhetho ekujolise kulo lwabafowunelwa kunye nokurekhoda umyalezo. Isicelo siza kwenza ezinye izinto ngendlela ezenzekelayo, eya kuthi inciphise inkcitho eninzi.
Ukuphunyezwa kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yethu kukuvumela ukuba unciphise inani labasebenzi abafunekayo kwishishini lakho kakhulu. Unokuzikhuphelela kwaye uqale ukusebenzisa inkqubo yothutho lwangoku, ngaphandle kokuhlehlisa ukwenziwa komsebenzi weofisi. Ngokuhlawula isixa esincinci kakhulu semali ukuthenga iSoftware ye-USU, ugcina isixa esikhulu semali ekugcineni abasebenzi abagciniweyo.
Inkqubo yethu yezothutho, onokuyikhuphela simahla kwiwebhusayithi yeSoftware ye-USU ngohlobo lwedemo, inesikim sezixhobo seemodyuli, esenza ukuba kube lula ukuba abasebenzi basebenze nayo. Unokuzikhuphelela kwaye usebenzise inkqubo ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwengxaki. Ukuthenga ingxelo elayisenisiweyo yesicelo, nceda unxibelelane neengcali zenkampani yethu. Bonke abafowunelwa badweliswe kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani yethu.